Casdị ejiji na jeans na t-shirt iji gaa obodo | Bezzia
Stylesdị ejiji na jeans na t-shirts iji gaa obodo ahụ
Maria onyekwere | 03/05/2021 18:00 | Kedu ihe m ga-eyi
Jeans bụ ezigbo enyi mgbe ike ukporo ekike ọ bụ maka. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile nwere ma ọ dịkarịa ala otu jeans na uwe anyị, na n'etiti ndị a, e nwere otu ụzọ anyị na-azọ mgbe anyị na-achọ nkasi obi kachasị.
Na ndị ahụ jeans na-eme ka ahụ ruo gị ala, Na ọkwa niile, ị nwere ike ịmegharị ụdị ọ bụla nke anyị na-agwa taa. Stylesdị zuru oke maka ụbọchị ndị ahụ mgbe anyị na-ahapụ ụlọ na-enweghị atụmatụ ma ọ bụ mgbe anyị maara na anyị ga-agagharị nnukwu akụkụ nke obodo ahụ.
Ọ bụrụkwa na anyị na-ekwu maka atụmatụ ebumnuche na ịga ije ogologo, ọ nweghị ngwa ga-enye anyị nkasi obi ka ukwuu karịa ole na ole T-uwe elu ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ egwuregwu. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị nwere ọkara nke usoro anyị kwadebere. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ n’elu.
N'oge opupu ihe ubi a uwe elu ma ọ bụ isi t-shirt ha na-aghọ oke nhọrọ. Uwe elu na-acha ọcha bụ ihe dị mkpa anyị nwere ike itinye na uwe ndị na-enweghị atụ dịka ndị anyị na-eke taa yana ndị ọzọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-akụ nzọ elu, mee ya otu na-acha ọcha ma ọ bụ oji iji mepụta uwe dị mfe nke na ike agaghị agwụ gị.
Maka ụtụtụ ma ọ bụ abalị ndị ahụ dị jụụ, họrọ a jaket ma ọ bụ jaket dị mkpụmkpụ iji nyere gị aka ịlụ ọgụ oyi. Ọ bụrụ na ị na-aga maka uwe ndị bụ isi iji mepụta ọhụụ dị mfe, mepụta ọdịiche dị iche n'etiti jaket na uwe elu iji gbakwunye mmasị na ya.
Echefula banyere uwe ndị bụ isi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ uche gaa n'otu akụkụ nke uwe gị. Edere ederede ma ọ bụ jiri nkọwa ndị na-ewu ewu dị ka akwa mkpuchi ma ọ bụ aka uwe ọ ga-eme ka anya niile dabere na nke a.
Do na-ejikarị njikọta nke jeans na uwe osimiri wee mepụta uwe ndị na-adịghị mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Kedu ihe m ga-eyi » Stylesdị ejiji na jeans na t-shirts iji gaa obodo ahụ
Otu esi agbanwe ime ụlọ ịwụ ahụ ụzọ dị mfe
Ndị ọzọ iji mee anụ anaghị eri anụ